वीपी प्रतिष्ठान धरानबाट कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु:: Mero Desh
वीपी प्रतिष्ठान धरानबाट कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु
Published on: १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०८:०५
धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको प्राण घातक रोग कोभिड-१९ कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरिएको छ । आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रतिष्ठानले कोरोना सक्रमणको स्वाबको परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
उनले कोरानाको उपचार र रोगथामका लागि खटिएका चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले कोराना संक्रमितको उपचार प्रभावकारी रुपमा गर्न र बिरामीको उपचारमा कुनै प्रकारको कमीकमजोरी नगर्न प्रतिष्ठानका चिकित्सकलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा कोरोनाको स्वाब परीक्षण सुचारु भएसँगै प्रतिष्ठानको ल्याबलाई स्त्तरोन्नती गरिएको मेडिसन विभाग प्रमुख प्राडा. संजिवकुमार शर्माले बताए । उनले कोराण परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानमा भएको दुईवटा र सरकारले उपलबध गराएको एउटा गरी तीनवटा बायोसेफ्टी क्याविनेट टीको मद्धतले कोरोनाको परीक्षणसुचारु गरिएको बताए ।
कोराना स्वाबको परीक्षण गर्न प्रतिष्ठानको बामाइक्रोबाइलोजी विभागका प्रमुख प्रा. डा जसोदा खनाल, डा. नारायण भट्टराई लगायतका चिकित्सक र ल्वाब टेक्निसियनलाई परिचालन गरिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले बताए । प्रतिष्ठानमा कारोना रोगको परीक्षण सुचारु भएसँगै प्रदेश १ र २ का कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा सहज हुने भएको छ ।